Barcelona oo aan ugu hambalyeynin kooxda Atletico Madrid ku guuleysiga koobka Europa League, sababa la xiriira Arintan – Gool FM
(Barcelona) 17 Maajo 2018. Waxay u muuqataa in xiriirka u dhexeeya kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona uu sii xumaanayo, maalmihii dhawaa ee lasoo dhaafay. Kahor inta aysan kooxda reer Catalonia sameynin isku day ay ku dooneyso saxiixa Antoine Griezmann.
Madaxa fulinta ee kooxda Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin ayaa wuxuu dhowr jeer oo horey kaga digay Barcelon isku dayada ay ku dooneyso Griezmann, wuxuuna ka codsaday in ixtiraam kooxda iyo qandaraasyada ciyaartoyda.
Dhinaca kale madaxweynaha kooxda Atletico Madrid Enrique Cerezo ayaa kahor kulanka finalka Europa League wuxuu dalbaday in la ixtiraamo Atletico Madrid iyo dhamaan jamaahiirteeda, kadib markii ay soo baxeen warar been abuur ah eek u aadan in Barcelona ay xiriir hoose la sameesay Griezmann. Iyadoo isku dayaysa inay bixiso lacagaha ku dooneyso in ay heshiiskiisa ku kansasho ee gaarsiisan aduun dhan 100 milyan euro.
Si kastaba Barcelona ayaa la xasuustaa in ay hambalyo u dirtay kooxda Atletico Madrid, kadib marka ay ku guuleysteen koobka Europa League sanadihii 2010 iyo 2012.
Laakiin kooxda reer Cataloia ayaanan sameynin sanadan 2018 in ay habalyo u dirton dhigeeda Atletico Madrid, sida ay ugu hambalyeeyeen kooxaha kale ee Real Madrid, Villarreal, Real Betis.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa isna dhankiisa wuxuu shaaca ka qaaday in madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu uu si toos ah ugu hambalyeeyay dhigiisa Enrique Cerezo kadib ku guuleysigooda koobka Europa League markii saddexaad ee taariikhda.